Raclette na-agwakọta nri na isoro ndị ezinụlọ na ndị enyi na-akpakọrịta
Raclette | Nri na ihe ọṅụṅụ
Raclette na-agwakọta ihe oriri na njedebe
Ọtụtụ maara ma hụ ya n'anya - raclette
Raclette, nri dị na efere ọkụ ma ọ bụ nkume na-ekpo ọkụ na panda ndị e jikọtara ọnụ abụwo otu kụrụ aka na-ewu ewu ọtụtụ afọ. Raclette abụghị nanị na ọ dị mma maka oriri ahụ, kamakwa maka ụtụtụ mgbede ezinụlọ, maka mgbede na ndị enyi, na New Year Eve ma ọ bụ maka ụbọchị ọmụmụ na ọtụtụ oge ndị ọzọ, nri na efere dị n'etiti okpokoro bụ ewu ewu.
Raclette - nri dị mma na pụrụ iche
Mana olee ihe na-eme ka ụdị nri a bụrụ ihe a ma ama? A na-eri Raclette ma na nri ehihie na mgbede. Ọ dị mma maka ihu igwe oyi n'ime ụlọ kamakwa n'oge okpomọkụ n'ime ogige ahụ, na mbara ala ma ọ bụ na mbara igwe raclette nwere ike iri. Ihe mara mma ebe a bụ mmekọrịta mmadụ na onye maara ihe, obi ụtọ nke onye ọ bụla.
Rie nri ọnụ
Nkwadebe maka raclettes dị nnọọ mfe, n'ihi na "onye na-eri nri" na-ewepụta nchịkọta kpọmkwem na tebụl. Onye nke ọ bụla na-eri nri na-ahọrọ nri ya, bụ nke ọ chọrọ itinye na raclette ma ọ bụ tinye ya.
Raclette nyekwa ndị anaghị eri anụ
Ma ndị na-eri anụ, ndị na-eri anụ, anụ, azụ ma ọ bụ ndị na-eri sausaji, ebe a ka onye ọ bụla na-enweta ihe oriri ya kacha amasị. Enwere ike ime ihe niile n'oge nkwadebe. Onye ọ bụla na-egbutu ihe oriri a chọrọ tupu ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụ "pancake maker" ka ọ na-egbochi nri ọ chọrọ.
Na pans mara mma nke ukwuu ihe niile na-atọ ụtọ, ma ọka, anụ ezi, yabasị, mushrooms, oporo, asparagus, akwụkwọ nri, obere anụ ma ọ bụ soseji, galik - enwere ike ịnọgide na ndepụta ahụ ruo mgbe ebighị ebi. N'ikpeazụ, a na-eghe ihe ndị e ji esi nri na pancake na chiiz raclette, mana ọ bụ naanị iwe ọkụ ma ọ bụghị ihe ọṅụṅụ ga-ekwe omume.
Ihe ukwu banyere ụdị nkwadebe a bụ mmekọrịta. Ọ dịghị onye na-anọdụ na tebụl n'enweghị okwu ma rie. N'ihi ịkwado onwe gị n'usoro na tebụl, ohere na oge iji kwurịta okwu dị ọtụtụ, nke na-eme ka raclette na-ewu ewu karịsịa na ụlọ ọrụ buru ibu ma ọ bụ n'ime ezinụlọ.
Enweghị iwu ndị siri ike na nkwadebe ma e nwekwara ihe ụfọdụ iji tụlee na raclette. Raclette pụtara nkwadebe na tebụl, ya bụ, - ihe ndị na-emepụta ekwesịghị ịnwe nri ogologo oge ma ọ bụ oge nri.
Tụkwasị na nke ahụ, nri ekwesịghị ịhapụ mmiri buru ibu ma ọ bụ mkpa abụba ịkwadebe. N'okwu a, a na-atụ aro ịkwadebe nri ma ọ bụ nweta nri ma mesịchaa okpomọkụ na raclette.
Ọ bụ ezie na onye ọ bụla na-eji obi ụtọ na-anọdụ ala na tebụl, nri ndị a na-eme n'onwe ya na-adị n'elu efere ma ọ bụ na pan. Nri a na-atọ ụtọ maka afọ niile. Iji dabara ụdị nri dị iche iche, salads, dips ma ọ bụ ihe ndị ọzọ.
Raclette abụghị naanị ihe na-esi ísì ụtọ, ọ na-agbasakwa ọkụ. Ihe ọtụtụ ndị na-amaghị ma ọ bụ na-echebeghị echiche - ụdị nri a abụghị naanị na ọ dị mma maka nkwadebe nke nri isi na ihe oriri dị ụtọ nwere ike ịkwado ya na ngwa ụlọ a.
Nọdụ ala ma rie nri ọnụ
Dịka ọmụmaatụ, a pụrụ ịkwadebe mkpụrụ fig ndị nwere mmanụ aṅụ na cheese cheese, ma ọ bụ Nutella nwere ike iwe ọkụ na banana. Echiche enweghị njedebe iji rie nri a.
Ọ bụrụ na ị na-amasịghị cheese cheese mgbe niile, ị nwekwara ike ịtinye pans ya na Gauda, ​​Edammer ma ọ bụ Mozarella, ya mere na ebe a kwa, enweghi oke ókè gị n'echiche.
Ọhụrụ dị iche iche nke raclette bụ ngwaọrụ nwere obi ụtọ zuru ezu
N'etiti raclette a na-ewebata ite na-atọ ụtọ. The variants na ohere bụ ebe a buru ibu. Ihe e mepụtara raclette adịworị ka okenye kama njiko ya adịghị akwụsị, ọ bụghị kwa ihe kpatara ya.
Enweghị ebe ọzọ ihe dị iche iche dị iche iche nwere ike ịdị n'otu ma nọrọ ọdụ n'oche otu tebụl na iri nri na ọnọdụ enyi na, dịka e kwugoro, ntụrụndụ ezughị. N'ebe a, ọ bụghị naanị na-eri nri, mana ụlọ ọrụ ahụ nwere obi ụtọ.
Nri nri | Nri na ihe ọṅụṅụ
Ntụziaka salad uzato | Nri na ihe ọṅụṅụ
Fondue | Iri na ịṅụ ihe ọṅụṅụ na ndị enyi
Ntụziaka Ntuziaka na - Nri na ihe ọṅụṅụ
Food Organic | Nri na ihe ọṅụṅụ
Chekwaa nri kwesịrị ekwesị | Nri na ihe ọṅụṅụ
Pasta Salad Recipe | Nri na ihe ọṅụṅụ
Ihe na-agba agba nri na ihe ọṅụṅụ
Iyi akwa na-aṅụ kọfị